China HDPE fanamafisana orina fantsom-pamokarana (rafitra B-type) sy mpanamboatra | Shengyang
HDPE miolakolaka fanamafisana rafitra rindrina karazana B fantsona dia antsoina koa hoe HDPE paompy mihodina paompy rindrina, fantsona carat, fantsom-panafahana karazana HDPE, fantsom-piolahana polyethylene avo lenta, karazana paipa rindrina B. Izy io dia karazana fantsom-pifanentanana vaovao misy lanjany maivana, tanjaka avo, rindrina anatiny milamina, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny fahanterana, fanoherana, fanamafisana ny tsindry, fanoherana ny fiantraikany mahery vaika, fahalemena ary fiarovana. Avo ny kalitaon'ny las, mifandray ny vatana, tsara ny kalitaon'ny fifandraisana, tsy misy famoahana, lava ny fiainam-panompoana, ary haingana sy mora ny fanamboarana.
◎ Fihetsiketsehana mafana mihetsiketsika, fihoaram-pefy mifamatotra ao anatiny sy ivelan'ny rindrin'ny rafitra, fanamiana amin'ny paipaika manontolo, tsy misy las.
◎ Ny fampiasana fitehirizana hafanana amin'ny alàlan'ny rivotra, ao anaty ny famolavolana nozaraina tanteraka, dia tsy hamorona fihenjanana anaty, tsy misy delamination sy triatra.
◎ Demôlôgy mangatsiaka, fantsom-panafody amin'ny hafanan'ny efitrano, amin'ny fampiasana demoulding mode mavesatra, tsy ho simba ny fantsona. Ary HDPE hollow rindrina miolakolaka fantsona, ny fampiasana ny fitaovana anatiny sy ny teknolojia, polyethylene avo lenta (HDPE) ho akora, ao anaty rano-mangatsiaka, mafana-miempo ratra mamorona, rafitra A-karazana mifanaraka amin'ny iraisam-pirenena GB / Fitsipika T19472.2-2004 Sodina rindrina. Mandritra izany dia esorina voalohany ilay fantsona toradroa, avy eo miendrika ary vonoina ho fantsom-boribory aorian'ny fampangatsiahan'ny rano azy.
◎ HDPE fantsom-pamokarana polyethylene avo lenta avo lenta amin'ny famokarana fepetra takiana amin'ny akora dia tena avo lenta, ka ankoatry ny 2% ny masterbatch. Ankoatra izany, ny HDPE hafa no fitaovana, noho izany dia somary ambany ny vidiny. Ary HDPE hollow wall miolakolaka nohamafisin'ny peratra fantsom-bokatra dia namokatra fampiasa betsaka kokoa, ka avo kokoa ny vidiny. Na izany aza, noho ny fampanjariam-bola kely kokoa amin'ny fitaovana famokarana, ny sakana ambany, ny mpamokatra maro kokoa, amin'ny fifaninanana mikorontana eny an-tsena, mba hahatratrarana ny vidin'ny Advantage, fitaovana marobe (tsy misy gazy karbonika) ary fitaovana fanodinana, miteraka elanelam-bidin'ny tsena lehibe, ary ambany be.
◎ HDPE miolakolaka fantsona nohamafisina mampiasa socket karazana electrofusion fifandraisana (henjana interface tsara), interface tsara mampiasa socket sy electrofusion fomba roa miaraka. HDPE spiral reinforced spiral tsy mahazaka tsia Ao amin'ny faritra ilana famerenana famerenana haingana dia azo ampiasaina amin'ny fantsona maro samihafa ny fantsom-pamokarana HDPE. Ny tany ho an'ny fametahana voditongotra marobe, ary avy eo atsofohy ao anaty hady kely. Ary HDPE hollow rindrina miolakolaka fantsona mampiasa (herinaratra) hafangaro fomba hafangaro ho an'ny fifandraisana, noho ny fivoaran'ny seranan-tsambo, tsy azo ampifandraisina amin'ny fantsom-pako mihodina ny rindrina (elektrika). Aorian'ny famatorana tanteraka ny fantsona, ny fananganana dia tsy maintsy atsofoka ao anaty hady, izay mitaky fihadiana lehibe sy ny hafainganam-pandeha miadana. (Herinaratra) fifamatorana fehikibo mafana, firafitry ny hery tsy dia tsara, ampiarahina amin'ny fantsom-piraikitra amin'ny fantsom-pandrika, tsy afaka mifanaraka amin'ny fototra malefaka na faritra onenana tsy voapetraka.
◎ Amin'ny fitaovana mitovy amin'ny fantsom-panafihana HDPE (fantsom-B karazana) sy fantsom-baravarana HDPE (fantsom-bary A), raha oharina amin'ny fantsona B ho tsara kokoa noho ny A-fantsona, ny fampiharana ny fantsom-B dia tsara kokoa ihany koa noho ny A-fantsona, ao amin'io index io ihany, ny karazany roa amin'ny fantsona fantsona Mitovy amin'ny vidiny mahazatra dia tokony hitovy, ny vidiny dia tokony hitovy ihany koa, ny fahombiazan'ny vidin'ny fantsona B dia mazava ho azy fa tsara kokoa noho ny fantsona A-type .
◎ Fantsom-pamokarana mihodina HDPE, amin'ny tetik'asa lehibe nasionaly sy faritany ary monisipaly, be mpampiasa, indrindra any amin'ny faritra amoron-tsiraka, misy ny tsy fandriam-pahalemana. Ny faritra dia matetika ampiasaina. Ary HDPE hollow rindrina miolakolaka fantsona noho ny fizotrany sy ny firafiny dia tsy mitombina kokoa, ny fitaovana dia tsy madio, ny fiarovana ny injeniera dia ambany loatra, ary amin'ny faritra sasany amin'ny fantsom-pivoahana rindrina lavaka, ambany loatra ny fantsom-pivoahana rindrina lavaka. Voarara ny fampiasana ny injeniera, matetika tsy azo ampiharina amin'ny faritra amorontsiraka.
Tsy sarotra ny mamintina fa ny fampiasana ny socket electrofusion karazana socket an'ny fantsom-pifandraisana mihodina HDPE no malefaka indrindra, ary henjana ny interface. interface, miantoka ny interface misy tombo-kase sy ny rafitra voasedra. Mandritra ny fananganana ny tetikasa, raha avo ny latabatra ao anaty hady, sarotra ny faritra be amin'ny rotsakorana, na mafy ny fianjerana, dia azo atao amin'ny tany ny fametahana fantsona marobe ao anaty hady, izay tsy azo atao miaraka amin'ny fantsona hafa, afaka manafaingana ny fizotran'ny fanamboarana, ary azo atao toy izao. Mandritra izany fotoana izany dia misoroka ny fananganana mampidi-doza izy ary mampihena ny vidin'ny fananganana.
Sodina mitafy haraina vita amin'ny rindrina roa
Hdpe mitafo fefy paompy roa
Masinina vita amin'ny fantsom-baravarankely vita amin'ny rindrina HD
Pipe drainage mihosin-drindrina Hdpe Double Wall
Pipa fanariana fantsona Hdpe Double Wall mitafo fanitso
PP indroa fefy fefy sodina
HDPE fehikibo vy nanamafy spiral sodina mitafo